Naya Bikalpa | संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ - Naya Bikalpa संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७८ बैशाख ६, १६: ३९: १५
चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका कारण केही हदसम्म भएपनि कोरोना भाईरसको महामारी कमी भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि विस्तारै सबै वित्तिय क्षेत्रहरु खुल्न थालेका थिए र विद्यालय, विश्वविद्यालय पनि खुल्न थालेका थिए । तर अहिले पुनः एकाएक कोरोना भाईरस बढ्न थालेको हुँदा सबैतिर चिन्ता र चासो बढेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर कोरोना भाईरस विशेषज्ञ तथा चर्चित डा. शेरबहादुर पुनसँग हाम्रा संवाददाताले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशंः
पछिल्लो समय कोभिड–१९ संक्रमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण के हुन सक्छ तपाईलाई के लाग्छ ?
अहिले यसरी ह्वात्तै बढनुमा २ वटा कुरा देख्छु । पहिलो कुरा त नयाँ भाइरसको भेरिएन्ट खासगरी अघिल्लो भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ, अहिलेको नतिजा हेर्दाखेरी अर्को कुरा चाही जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई निरन्तरता दिनु भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेकै थियौ, त्यो चाही अहिले गरिएको छैन ।
त्यसकारणले गर्दा नयाँ खालको भाइरस भेरिएन्टलाई फैलन अझै सहज मिलेको अवस्था छ । त्यसकारणले बढेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहँदा यसको रोकथामका लागि राज्यले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला र के–कस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ला ?
यसमा चाही नीति निर्माताले एक प्रकारको सोंच बनाउनुपर्छ । खासगरी मानिसहरुले यसलाई के तरिकाले सोचिरहेका छन् ? किनभन्दा यो भन्दा अगाडि हामी सबैको मनस्थितिमा एक दुई वटा देखिएको भनेर सुन्दा पनि तर्सिन्थ्यौ ।
पछिल्लो समयमा अझ भनौं केही हप्ता अगाडिसम्म पनि सय जना देखियो भन्दा पनि वेवास्ता गरिरहेको अवस्था थियो । अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । यसमा हामीले हाम्रो जुन बानीव्यहोरा छ त्यसलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ ।
यो भाइरस सहजै रुपमा छिटो फैलन सक्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरुद्वारा पुष्टि भइसकेको छ । तर पहिलाको भन्दा अहिलेको अलि फरक किसिमको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
सम्बन्धित निकायबाट हामीले भन्दै आएको र उहाँहरुले गर्दै आइरहेको त्यो भाइरस क–कसमा छ ? कहाँबाट यसको मुभमेन्ट भइरहेको छ ? र संक्रमितहरु छन् भने उहाँहरुलाई आइसोलेसनमा बस मात्रै भन्ने होइन की त्यसको अनुगमन पनि नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभन्दा मलाई जहासम्म लाग्छ, मैेल बुझे अनुसार सक्रिय संक्रमित ४००० भन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । तपाई हामी सबैजना मिलेर अहिले नै यस्तो कुराहरुलाई वेवास्ता गर्नुहुँदैन ।
पछिल्लो समय बालबालिकाहरुमा पनि कोभिड–१९ भाइरस ह्वात्तै बढेको देखियो विद्यालयहरुमा बढी भिडभाड भएका कारण हो ?
पहिलाको र अहिलेकोमा मैले अलि फरक किसिमले हेर्ने कोसिस गरेको छु । पहिला लकडाउन भएको अवस्था थियो । यद्यपी पछि समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि या घरमा बुबा आमालाई भाइरस लागे बच्चाहरु पनि बिरामी भएर अस्पताल पुग्नुपर्ने हो तर त्यो बेलामा त्यस्तो अवस्था देखिएन तर अहिले विद्यालयलहरु खोलिरहेको अवस्था छ ।
स्कुलमा यसैपनि विद्यार्थीहरु एक अर्कासँगसँगै बस्ने, खेल्ने, कुराकानी गर्ने भइहाल्छ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ एक अर्कालाई सार्न सक्ने हुन्छ । एउटा संक्रमित परिवारले विद्यार्थीमार्फत अर्को विद्यार्थीबाट उसको परिवारमा फैलन सक्ने पनि हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु बन्द गर भनेर सूचना दिइरहँदा पनि किन अहिलेसम्म बन्द हुन सकिरहेको छैन ?
त्यसमा उहाँहरुको आफ्नै केही कारणहरु होलान् । यस विषयमा मैले धेरै बोल्नु पनि जरुरी देख्दिन तर एउटा टेक्निकल हेराइबाट भन्ने हो भने जहाँ धेरै मान्छेको समूह हुन्छ, त्यहाँ त्यो भाइरस फैलिनलाई राम्रो एउटा ठाउँ हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
अरु ठाउँहरु पनि छन् मैले स्कुल कलेजलाई मात्रै पनि भनेको होइन । होटल, रेष्टुरेन्ट, जिम हल, क्लब मात्र नभइ राजनीतिमा संलग्न मानिसहरुको पनि नारा जुलुस गरेको पनि देखियो ।
त्यहाँ कुनै जनस्वास्थ्य मापदण्ड देखिएको अवस्था थिएन । जहा धेरै मानिसहरु जमघट हुन्छन्, जहाँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्दा गर्दै पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा छिटो फैलन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन, तत्काल लकडाउन हुन्न भनेर भनिरहँदा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन बाहेकको विकल्प के छ त ?
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि विशेष भूमिका नागरिकको पनि हुन्छ र त्यसमा सरकारको पक्षबाट पनि एक प्रकारको कोरोना भाइरसको बारेमा एकदमै आक्रामक रुपमा आएको छ । यो नयाँ कोरोना भाइरसको बारेमा बुझाउनुपर्ने आवश्यक देख्छु । लकडाउन चाही मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लकडाउन भन्ने बित्तिकै तुरुन्तको तुरुन्तै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन ।
यदि केही गरी सबै कसरतका बाबजुद एकदमै कोसिसका बाबजुद पनि नियन्त्रण गर्न सकिएन् भने कुनै एक पक्षले आफ्नो ठाउँबाट पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्न सकेन ।
यो अनियन्त्रित हुँदै गयो भने केही छोटो समयको लागि चाही लकडाउन गर्नुपर्ने सोच्न सकिन्छ । तर त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले त्यो अवस्था सिर्जना नै नहोस् भन्नका लागि चाही हामी एकदमै सचेत हुुनुपर्छ ।
मैले सायद दुई तिन महिना अगाडि नै यसको लहर आउन सक्छ है भनेर मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुबाट पनि भन्दै आइरहेको छु । तर दुर्भाग्यवश हामी त्यस्तै संघारमा आइपुगेका छौं । यदि हामीहरुले त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि चाही हामी सबैले नियमित स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ । यो भाइरस अहिले पनि हामी भन्दा एक कदम अगाडि छ ।
यो भाइरसले जसरी आफ्नो बानी व्यहोरा परिवर्तन गरिरहेको छ । त्यसलाई नजिकबाट नियाल्ने काम सरकारले आफ्नो टेक्निकल मार्फत् हेर्नुपर्छ । हामीले बच्नुपर्ने उपाय चाही लगभग हामीले पहिल्यै पनि गरिरहेको नै हो । धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुले खोप नपाएसम्म हामीले यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।
देशको विभिन्न जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ, तर सिमानाको कुरा गर्दा अझै खुल्ला छ भनेर धेरैको गुनासो छ तपाई के भन्नुहुन्छ ?
एउटा कुरा के हो भन्दाखेरी सीमानाबाट गएको वर्ष पनि हामीलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको थियो, त्यसै कारणले त्यो बेलामा भएका कमी कमजोरीलाई अगाल्दै मानिसहरु कसरी आउँदै छन् ? कुन मनस्थितिमा आउँदैछन् ?
कुन कुन ठाउँमा उहाँहरुलाई क्वारेन्टीनको व्यवस्था गर्ने ? अथवा संक्रमित भइसकेपछि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे समिक्षा होस् भनेर मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको हो ।
हामी अहिले यस्तो अवस्थामा आइपुग्यौ कि संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो अनि हामी बल्ल यो बारेमा चिन्तित भएजस्तो देखिन्छौ । अहिले मानिसहरु भटाभट अस्पताल भर्ना भइराखेका छन् । त्यसै कारणले हामी अहिले धेरै पछाडी परेको जस्तो मलाई लाग्दछ ।
यद्यपी अहिले ढिलो भयो भनेर हामी चुपचाप बस्ने कुरा आउँदैन । गतवर्ष के थियो भन्दा नेपाल नभित्रिएको अवस्थामा सिमाना हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण थियो । तर सिमानामा जति मेहेनत गरेपनि भएन ।
काठमाडौंभित्र मजाले घुमेको छ भन्ने कुरा पहिलेनै पुष्टि भइसकेको थियो । डबल म्युटेन्ट भएको भाइरस जब भारतमा देखिएको थियो । इन्डियन भेरियन्ट भन्दा पनि केही फरक नपर्ला । त्यो खालको भाइरस नेपालमा पनि छ भन्ने कुरा जब आइसकेको छ ।
अब सिमाना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सकेसम्म त्यहाँ रोक्नु आफ्नो कर्तव्यमा पनि हुन्छ । यदि सिमानामा फुत्केको छ भने आफ्नो गाउँमा के कसरी आइरहेको छ, त्यो बुझेर उहाँहरुलाई कमसेकम क्वारेन्टिनमा राख्नलाई सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ ।
अहिले चाही पहिलाको भन्दा फरक हुन्छ । अहिले हाम्रो समुदायभित्र पनि भएको र सिमाना पारीबाट आउने चाप पनि बढिरहेको हुनाले हामीसँग पहिलाको भन्दा अझ थप काम गर्नुपर्ने देखियो ।
२०७८ बैशाख ६, १६: ३९: १५